Nagarik Shukrabar - ‘सफलताका लागि समर्पण चाहिन्छ’
शुक्रबार, ०१ कार्तिक २०७६, ०५ : ४४
‘सफलताका लागि समर्पण चाहिन्छ’
सोमबार, २० असार २०७३, ११ : ५७ | दिलीप पौडेल , Kathmandu
कुन कम्पनीको गाडी चढ्नुहुन्छ ?
कति मूल्यको ?
७५÷८० लाख रुपैयाँ ।
अहिलेसम्म कति वटा गाडी फेर्नुभयो ?
छ वटा ।
परिवारमा कति निजी गाडी छन् ?
हामी संयुक्त परिवारमा छौँ । गाडी नै बेच्ने भएकाले परिवारका सबै सदस्यले प्रयोग गर्न ८÷१० वटा गाडी घरमै छन् ।
व्यक्तिगत सवारी साधनले के फाइदा दिन्छ ?
समय बचत गर्छ । व्यक्तिगत सेड्युल मेन्टेन गर्न सजिलो हुन्छ । प्रोडक्टिभिटी बढाउँछ । परिवारसँग क्वालिटी लाइफ बिताउन सकिन्छ ।
यहाँको रुचि केमा छ ?
घुम्न मन पराउँछु । खानामा रुचि छ ।
घरमै खाने कि बाहिर ?
जहाँ मीठो लाग्छ, त्यहाँ जान्छु । हरेक शनिवार लन्च र डिनर घरबाहिर नै हुन्छ ।
परिवारलाई कत्तिको समय दिनुहुन्छ ?
शनिवारको दिन परिवारसँग बिताउँछु ।
गाडी व्यापार कस्तो छ ?
नाकाबन्दीले खस्केको व्यापार अहिले धेरै वृद्धि भएको छ । करिब १८ सय नयाँ ट्याक्सी दर्ता गर्ने अनुमतिले पनि त्यो देखाएको हो ।
निजी सवारीमा मध्यम वर्गीयको पहुँच किन हुन सकेन ?
अहिले सवारी साधन सर्वसाधारणको पहुँच बाहिर छ । गाडी निकै महँगो भयो । सरकारले यसलाई विलासिताको रूपमा मात्र हे¥यो । सबैले प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था भएन । हामीले कर घटाउन माग गरेका छौँ । तर, सरकार हरेक वर्ष बढाउँदै जान्छ ।
सरकारले गाडीमा २ सय ४८ प्रतिशत भन्सार बढाएर २ सय ७५ प्रतिशत कर पु¥याएको छ । कर झन्झन् बढाउनु राम्रो होइन । सर्वसुलभ पहुँचमा पु¥याउनुपर्नेमा गाडी झन् महँगो बनाउँदा पहुँच बाहिर गएको छ । उच्च आम्दानी हुनेमात्र नभएर सबैले प्रयोग गर्ने बनाउन कर घढाउन माग गरेका छौँ । गाडीले उत्पादन क्षमता बढाउँछ । सार्वजनिक यातायातमा कमजोर भएको र यसले व्यक्तिगत आवतजावत, कार्यक्षमता वृद्धि गर्ने भएकाले विलासिताको रूपमा लिनुभएन ।
नेपालमा निजी सवारीमा पहुँचको अवस्था कस्तो छ ?
चारपांग्रेमा मुश्किलले पाँच प्रतिशत छ भने दुईपांग्रेमा जिरो दशमलव पाँच प्रतिशतभन्दा कम प्रयोगकर्ता रहेका छन् ।
कसरी सबैको पहुँचमा पु¥याउने ?
भन्सारको दर घटाउनुप¥यो । भारतमा भन्दा यहाँ गाडी दुई तिहाइ महँगो भयो । छिमेकी मुलुकअनुसार गर्न सक्छौ नि । भारतमा त्यही मोडलको गाडी एक तिहाई मूल्यमा चढेका छन् । सरकारले गाडी सर्वसाधारणको पहुँच बाहिर लगेर सम्भ्रान्तले मात्र चढोस् भन्ने नीति बनायो ।
नेपाली बजारमा कति मूल्यका गाडी छन् ?
न्यूनतम १४ लाख रुपैयाँदेखि चार करोड रुपैयाँसम्मका ।
बजेटले अटोमोबाइल क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पा¥यो ?
बजेटले गरेको करको दर परिवर्तन साउन १ गतेबाट सुरु हुने भए पनि अहिले सबै कम्पनीहरूले करको दायरा परिवर्तन सुरु गरेका छन् । बजेटले मर्मतसम्हारका सामग्रीको शुल्क परिवर्तन गरेकोले लागत बढेको छ । बजेटमा आउने प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै भटाभट सबैले मूल्य परिवर्तन सुरु गरेका छन् । केहीले बढाए । केहीले बढाउँदै छन् । सबैले समायोजन गर्दैछन् ।
पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्ने ।
व्यक्ति सफल हुन के गर्नुपर्ला ?
मुख्य कुरा काममा समर्पण हुनुपर्छ । सम्बन्धित क्षेत्रको ज्ञान हुनुपर्छ । कसैले लिएर, जानेर आएको हुँदैन । ज्ञान लिँदै अघि बढ्ने हो ।
ह्वावेमा पाँच वटा एआई क्यामेरा
ह्वावे कन्जुमर बिजनेस ग्रुपले नयाँ स्मार्टफोन ह्वावे नोभा ५ टी नेपाली बजारमा सार्वजनिक गरेको छ। नेपालभर उपलब्ध यो फोनमा फ्युचरिस्टिक डिजाइन र पाँच वटा ५ एआई क्यामरा रहेको कम्पनीले जनाएको छ।
दसैं अफरसहित सिटिसीमा मोबाइल मेला
मोबाइल मेलामा ६० प्रतिशतसम्म छुटका साथै बाई वान गेट वान फ्रि अफर मेलाको आकर्षण रहेको छ। मोबाइल मेलामा मेरो सुरक्षासँगको सहकार्यमा निःशुल्क मोबाइल बीमाको समेत व्यवस्था गरिएको छ।
वार्षिकोत्सवमा माछापुच्छ्रेको छूट
बैंकले ग्राहकलाई असोजभर निःशुल्क डेबिट कार्ड प्रदान गर्ने, डिम्याट खाता तथा मेरो सेयर खाता निःशुल्क खोलिदिने, देशभरका भाटभटेनी सुपरमार्केटमा बैंकको डेबिट वा क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरी सामान किन्दा १० प्रतिशतसम्म क्यास ब्याक अफर सुविधा प्रदान गर्ने जनाएको छ।